किन टुट्छन् प्रेम सम्बन्ध ? Feb 13, 2014 09:49
बिर्सने छन् साराले पुराना दिनका कथा……
हो, नारायण गोपालले गाएको यो गीत भ्यालेन्टाइन डेको आगमनसँगै केही युवायुवतीहरु लागू गर्ने तयारीमा छन् । आफूले मन पराएको युवा वा युवतीलाई प्रस्ताव राख्न लालयित भइरहेका छन् ।
केही युवायुवतीहरुमा भने भ्यालेन्टाइन डेको उत्साह छैन । प्रेम र ‘डेटिङ’ भन्ने बित्तिक्कै निराशा छाउँछ उनीहरुमा । कुनैबेला अथाह माया समर्पण गरेको प्रेमी— प्रेमिकाबाटै धोका पाएपछि उनीहरुको हृदय छियाछिया भएको छ । माया भनेको धोखा र चोटको पर्याय ठान्दछन् उनीहरु ।
अहिले माया र प्रेम व्यापारिक बन्दै गएको छ । वर्ष होइन, महिना दिनमै जोडी टुटेको घटनाहरु पनि छन् । एउटासित ‘साटिएको मुटु’ कुनैपनि बेला अरुकोमा टाँसिन पुग्न सक्छ । विद्धानहरु भन्छन्, प्रेम गर्नु भनेको भगवानको आराधना हो । तर अहिले यो धारणा परिवर्तन भएको छ । थोत्रो दर्शन बनेको छ । अहिलेको युवा पुस्तामा माया भनेको ‘ग्याजेट्स’ हो, जुन सजिलैसँग परिवर्तन गर्न सकिन्छ । अफेयर टुट्दा दुःखी नहुने जमात बढेको छ ।
अफेयर ग्याजेट्सझैँ किन परिवर्तन हुन्छ ? किन मायाको व्यापारीकरण भइरहेको छ ? घाइते प्रेमीप्रेमिकाहरु यो विषयमा विभिन्न धारणा राख्छन् । कतिपयले प्रेम सम्बन्धलाई देखावटी शानसित जोडेर हेर्छन् । कतिपयले आफ्नो प्र्रेमी—प्रेमिकाले आफूसित प्रतिवद्ध माया नदर्शाएको पीडा पोख्छन् । पश्चिमा समाजमा चलिआएको अस्थायी युगल सम्बन्धको अभ्यास हुन थालेको छ नेपालमा पनि ।
खासगरी सहरीकरणमा हुर्किएको किशोर पुस्तामा ‘अफेयर’ विचलनको घटना बढी देखिएको छ । कक्षा १२ मा अध्ययनरत काठमाडौ, शान्तिनगरका अमृत घिमिरे अफेयर परिवर्तन हुनु सामान्य भएको बताउँछन् । ‘दुबैमा हार्दिकता भइरह्यो भने सम्बन्ध टिकिरहन्छ’ उनले भने ‘एउटाले देखाएको सम्झौता र उदारतालाई उसको प्रेमी वा प्रेमिकाले कमजोरी ठान्नु भएन ।’
उनकै छिमेकी सरिता दाहाल पनि ‘घाइते’ प्रेमिका हुन् । उनको एक वर्षको अफेयर उनकै प्रेमीले गरेको दोहोरो चरित्रले टुट्यो । ‘प्लस टू’ पढ्दाखेरि उनको बेञ्च सामुन्ने बस्ने अभिषेकसँग आँखा जुधिरहन्थ्यो । तर दुबैले आपसमा प्रस्ताव राख्ने हिम्मत गरेका थिएनन् । एकदिन पिकनिकमा अभिषेकले सरिताकी बालसखा सौजन्यमार्फत् प्रस्ताव पठाए । सौजन्यले ‘कन्भिन्स’ गरिन् उनलाई । भित्री मनले त चाहेकै थिइन्, एक दिन कुराएर भोलिपल्ट प्रस्ताव स्वीकारिन् ।
प्रस्ताव स्वीकृतिसँगै उनीहरुको डेटिङ चल्दै गयो । होमवर्क सार्ने, क्यान्टिनमा सँगै हुनु सामान्य हुन थाल्यो । राति घन्टौसम्म फोन वार्ता, च्याटिङ र एसएमएसको बाढी हुन्थ्यो । यो जोडीलाई सहपाठीहरु सबैले भन्थे, लैलामजनू ।
तर यो सम्बन्ध एक वर्षपछि क्षतविक्षत भइदियो । ‘एकदिन क्यान्टिनमा एक्लै कफी पिउन पुगेको थिएँ । क्याफेको कुनामा एउटा केटा र केटी लपक्क टाँसिएर बसेका थिए’ सरिताले भनिन् ‘अचानक त्यो केटा र मेरो आँखा जुध्यो । म छाँगाबाट खसेजस्तो भएँ । त्यो केटो अभिषेक पो रहेछ ।’
सो घटनाले उनी पागल झै भइन् । केही बोल्नै सकिनन् । ‘ऊ मलाई क्लेरिफिकेसन दिन खोज्दै थियो, मैले एक झाप्पड हिर्काएँ र रुँदै निस्किएँ’ सरिताले वेदना सुनाइन् ‘ त्यसपछि मैले अफेयर टुटाएँ ।’
यस्तै, आयुष्मा कोइरालाको कथा पनि दुःखद छ । प्रेमीले उनीसित राख्न खोजेको फिजिकल रिलेसन प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि महिनौंको अफेयर टुट्यो । त्यसो त, नयाँ बानेश्वरकी रोजिना शर्मा र उनको प्रेमी संगम विष्ट दुबैले आफूहरुको सम्बन्धको गन्तव्य निर्धारण गर्न सकेनन् । सहरी पुस्तामा अभ्यस्त हुँदै गएको ‘अफेयर एण्ड सेक्स’ दुबै उपभोग गरे उनीहरुले । तर सम्बन्धको दुई वर्षपछि संगमलाई उसको अभिभावकले होटल म्यानेजमेन्ट पढ्न युके पठाइदिए । उनीहरुको सम्बन्ध त्यत्तिकै टुट्यो । अहिले रोजी अष्ट्रेलियामा छिन् ।
अचेल प्रेमलाई अस्थायी ‘रोमान्स’ ठान्ने जमात बढिरहेको छ । प्रेममा प्रतिवद्धता र गन्तव्य निर्धारण नगरी अघि बढ्ने युवायुवतीहरु निकै छन् । योजनाविहीन र भौतिक प्रेम सम्बन्ध हावी भइरहेको छ । फलस्वरुप, ‘घाइते’ प्रेमी प्रेमिकाहरुको संख्या बढिरहेको छ । एक वाक्यमा भन्नुपर्दा, प्रेममा आत्मीयता हराउन थालेको छ ।
अरु समाचारहरु :: Entertainment
किन टुट्छन् प्रेम सम्बन्ध ?